Izibhengezo zokuqala ze-Apple Music zifika | Ndisuka mac
Izibhengezo zokuqala ze-Apple Music ziyafika
Ngalo lonke ixesha iApple iveza imveliso okanye inkonzo, ixesha elifutshane yinto edlulayo de iividiyo ezisetyenziswe kwividiyo ziqale ukuvela kwisitishi sayo seYouTube. I-Keynote njengezinto ezintsha ezenziweyo njengebango lentengiso.
Namhlanje singakubonisa iividiyo zokuqala zentengiso ezenziwe ngu-Apple ukwazisa ngenkonzo entsha ngentshisakalo enkulu. Njengoko usazi, i Apple Music hit kumazwe angaphezu kwekhulu ngoJuni 30, mhlawumbi ngohlaziyo kwi-iOS 8.4
Okwexeshana ngoku Indlela yentengiso yeApple itshintshile ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba iimveliso ezivezwe kufutshane azisabonakali, kodwa into eyenziweyo kukujonga intengiso ekusetyenzisweni kwazo ngabantu, okt, lolona phawu lwabantu lokusetyenziswa kwezi zixhobo.
Ngoku ngenkonzo yokusasaza iAudio Music kwenzeka into enye kwaye njengoko uza kuba nakho ukubona kwiividiyo esizincamathisileyo, ezo zivela eCupertino zime kwaye zininzi ekufuneka zenziwe Jonga icala lomntu lokuba ubukho beApple Music buza kuthetha ntoni.
Nazi iintengiso ezintathu ezintsha esithetha ngazo:
Sele sijonge phambili kwi-30 kwaye sikwazi ukuqala ukonwabele iinyanga ezintathu zasimahla iApple iza kunika bonke abasebenzisi abane ID yeApple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Music » Izibhengezo zokuqala ze-Apple Music ziyafika
I-Apple yongeza amanqaku eBeta kwi-ICloud.com ye-OS X 10.11 kunye nabavavanyi beBeta be-iOS 9
IOS 9 izakuvumela ukuba usebenzise ukuqhubekeka neMac yakho kwinethiwekhi yefowuni ngaphandle kokuya kunxibelelwano lweWi-Fi